Sidee Bay Markhaatiyaasha Yehowah Hawshooda Caalamiga ah u Maaliyaan?
Sidee Baa Hawsheenna Caalamiga ah Loo Maaliyaa?
Ururkayaga waxay soo saaraan oo bilaa lacag dadka u qaybiyaan boqolaal malyuun oo Kutub iyo wargeysyo kale. Waxaan dhisnaa oo dayactirnaa Hoolalka Boqortooyada iyo laamaheenna. Waxaan masruufnaa kumanyaal walaalo sida kuwa Beytel ka adeego iyo kuwa loo diray waddammada kale inay wacdiyaan. Markay dhibaato dhacdana dadka waan u gurmanaa. Waxaad is oran kartaa sidee baa waxan oo dhan loo maaliyaa?
Lacag qofna ka ma ururino. Hawsheenna wacdiga kharash badan baa ku baxo laakiinse lacag cidna ka ma codsanno. Boqol sano kahor majalladdeenna labaad (ee Watchtowerka) waxaa lagu qoray inaan rumaysan nahay inuu Yehowah yahay maalgeliyeheenna. Waxaana ku qornaa “inaan binuʼaadmi lacag ka baryi doonin ama ka codsan doonin.” Taasna weligeed may dhicin.—Matayos 10:8.
Sadaqo baa lagu masruufaa hawsheenna. Dad badan baa qiimeeyo hawsha waxbarashada Kitaabka aan sameyno oo u sadaqeeyo. Markhaatiyaasha Yehowah iyaguna waqtigooda, xooggooda, xoolohooda iyo waxyaalaha ay haystaan waxay u bixiyaan in doonista Ilaah lagu sameeyo dunida oo dhan. (1 Taariikhdii 29:9) Hoolalka Boqortooyada iyo shirarkeenna oo dhan waxaa ku yaallo sanduuqyo sadaqo loogu talaggalay ama websitekeenna jw.org bay kuwa rabo wax ku sadaqeyn karaan. Inta badan sadaqada kuwa bixiyo ma ahan dad lacag badan haysto. Waxay yihiin sidii carmalkii miskiinta ahayd uu Ciise ammaanay markay laba shilin oo faaʼiido yar ku ridday khasnadda macbudka. (Luukos 21:1-4) Tani waxay ina tustaa inuu qof walba awoodo inuu si joogta ah qalbigiisa waxa ka soo goʼay Ilaahay u sadaqeeyo.—1 Korintos 16:2; 2 Korintos 9:7.
Waan hubnaa inuu Yehowah kuwa rabo inay maalkooda ku sharfaan qalbiyadooda dhaqaajin doono siday u taageeraan hawsha Boqortooyada oo doonistiisa u dhacdo.—Maahmaahyadii 3:9.
Maxaa ururkeenna ka soocay diimaha kale?
Maxaa lagu qabtaa sadaqooyinka?
Download gareyso majalladaha Watchtower iyo Awake!
Wadaag Wadaag Sidee Baa Hawsheenna Caalamiga ah Loo Maaliyaa?